Cudurka Autism oo dadka qaba ey ku fekeraan iney is dilaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nin salcaan hayo oo ilmo iska tiraya isaga oo daaqadda taagan. sawir: FREDRIK SANDBERG / TT
Cudurka Autism oo dadka qaba ey ku fekeraan iney is dilaan
La daabacay onsdag 6 december 2017 kl 16.01
Cilmi-baaris ayaa lagu ogaadey in shan jeer in ka badan ey dadyoowga qaba cudurka Autiismadu ku fekeraan iney qudha iska jaraan kolka loo barbar-dhigo bulshada inteeda kale.
Natiijada cilmi-baarista oo aan weli la shaacin ayay ku caddaatay in tobankii ruuxba mid ee qaba cudurka autiismada ee aan maskixiyan ka liidan isku dayo inuu qudha iska jaro, sida uu qoray Dagens Medicin.
Tatja Hirvikoski, ahna caalimad ka howl-gasha machadka Karolinska iyo FoU-chef ee hayad-goboleedka Stockholm ayaa ka dambeeysay cilmi-baaristaan iyada oo la kaashatay asxaabteeda. Waxayna aamin-san tahay in xarumaha xiriirka la leh dadyoowga qaba cudurka autiismada ey arrinkan howlahooda ku darsadaan.
-Waxaa looga baahan yahay hab cayiman oo ey ku howl-galaan goobaha caafimaadka, adeegga bulshada iyo dhammaan goobaha kale ee ku shaqada leh, sida ay sheegtay.
-Waa wax dhib badan in lala noolaado cudurka autiisamka. Bulshadani maahan mid u tureeysa dadyoowga u dhaqama si ka duwan. Way sahlan tahay in bulshada bannaanka looga baxo, hadday noqon lahayd iskuulka iyo suuqa shaqada. Waxaannu og-soonnahey inuu caafimaadkoodu liito in dadyoowga aanay u suurtagelin iney suuqa shaqada soo galaan.
Cudurka autism wuu ku soo badanaya caruurta
Ardeyda la ildaran autism iyo asperg oo iskulada ku dhibaateysan
Cudurka autism-iga iyo Soomaalida
Kaalmo la'aanta carruuraha qaba autism-ka
Caruuraha iyo cudurka fahandaradda ee Autism